Vidin'ny tarika ho an'ny maodely Apple Watch rehetra | Vaovao IPhone
Apple dia efa nanambara ny vidin'ny Apple Watch amin'ny maodeliny samihafa, ary koa iray amin'ireo fisalasalana sisa tavela amin'ny famantaranandrony: ny fehy dia azo vidiana tsy miankina. Amin'izany fomba izany no ahafahanao mahazo ny maodely mora vidy indrindra avy eo ampifanaraho amin'ny tadiny tianao indrindra izany, na mividiana fehin-kibo maromaro mba hanaingoanao manokana ny famantaranandronao arakaraka ny fotoana na ny fampiasa omenao azy. Fehin-kibo ho an'ny fanatanjahan-tena, iray hafa hivoahana, ary iray hafa hikitika tsara kokoa. Asehonay anao ny vidin'ny tady rehetra.
Manomboka amin'ny mora indrindra izahay, natao ho an'ny maodely fanatanjahan-tena ao amin'ny Apple Watch. Io no tadiny tokana miaraka amin'ity maodely Apple Watch ity, na dia afaka mifidy ny lokony aza isika. Izy io dia manana diametera marobe, ary habe roa (ho an'ny 38 sy 42mm). Manana ny vidiny mitovy izy rehetra: 49 $. Hita amin'ny loko fotsy, maitso, mavokely, manga sy mainty.
Iray amin'ireo tadiny Apple Watch mahagaga indrindra manana vidiny "takatry", indrindra raha ampitahaintsika amin'ny maodely hafa izy io. Rohy madinidinika izay crimped mba hamoronana tady iray izay nakaton'ny andriamby. Hisy ireo tsy tia an'io fa tiako ilay izy. Diameter isan-karazany sy habe samihafa miaraka amin'ny vidiny mitovy: $ 149.
Tena mitovy amin'ny Milanese, fa vita amin'ny hoditra, ary misy amin'ny loko isan-karazany. Izy io koa dia manana endrika maoderina sy rafitra fanidiana magnetika tena tany am-boalohany.. Ny habe sy ny savaivony rehetra ary ny loko rehetra dia mitentina 149 $. Hita amin'ny fasika, volontany, mainty sy manga.
Raha tianao ny hoditra fa mila fanidiana mahazatra kokoa dia azonao atao ny mifidy an'io fehy io ny vidiny mitovy etsy ambony: $ 149, na inona na inona habe na savaivony. Safidin'ny maro izy io, saingy eny, hita mainty ihany.
Modely hoditra iray hafa, miaraka amin'ny fanakatonana andriamby izay manome azy endrika maoderina kokoa. Ho setrin'izany, mila mandoa mihoatra noho ireo teo aloha ianao: $ 249. Hita amin'ny loko isan-karazany: mavokely, volontany, manga sy mainty.
Firavaka satro-boninahitra Araka ny vidiny dia ny tadiny vy mahazatra. $ 449 izay mahatonga azy io hitifitra, na dia tsy maintsy ekena aza fa io no mahavariana ny Apple Watch. Raha ilay tianao indrindra dia azonao atao izao ny manangona. Ny maodely mainty dia tsy voatanisa hividianana fitaovana.
Inona no fitambarana tianao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Vidin'ny tarika ho an'ny maodely Apple Watch rehetra
James dia hoy izy:
Mifoka sigara mihomehy ireto vahoaka Apple ireto, hividy fivelarana vy ny mpanjifa amin'ny vidiny 10 €, miaraka amin'ny tady ahazoako mividy famantaranandro tena izy fa tsy bara savony misy fampirantiana.
Valiny tamin'i James
Keynote Bittersweet: ny Apple Watch dia tsy vokatra betsaka
Misy izao ny iOS 8.2, ireto ny vaovaony